Fanafody hydrofluoro eten for pharmaceutical intermediate China Manufacturer
Description:Toeram-pitsaboana ho an'ny Pharmaceutical,HFE Apetraikitra ny fanadiovana,Pharmaceutical Intermediate Hydrofluoroether
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny Pharmaceutical Intermediate > Fanafody hydrofluoro eten for pharmaceutical intermediate
Hydrofluoro etereta-totozy fanadiovana ho an'ny Pharmaceutical intermediate
HFE hydrofluoroether fanadiovana ny tontolo manodidina ny tontolo iainana, manana ODP ny sandan'ny 0 sy ny ambany ambany GWP ambany. Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy, ny solika, ny LCD ary ny sarotra sns., ary azo ampiasaina ihany koa mba handotoana sy handotoana, fanandramana amin'ny fanodinana elektronika na fisedrana amin'ny rivotra, ary solvent.
HFE Inert Fanadiovana Agent PHI:
Ity Hfe Codorless Solution ity dia vondrona Hydrofluoroether. Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza , ary mitoka-monina. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra izy io, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, ny semiconductor, ny LCD ary sarotra disk etc., ary azo ampiasaina koa mba handotoana ary fanadiovana , fanandramana fitetezana elektronika na fitiliana fohy, ary solvent.
Fanadiovana Agents fanangonana, fitehirizana ary fitaterana:
Ity Solon'aretina Hexafluoropropyl Methyl Ether dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifan-tsakafo, mora voatahiry sy nentina.
Toeram-pitsaboana ho an'ny Pharmaceutical HFE Apetraikitra ny fanadiovana Pharmaceutical Intermediate Hydrofluoroether